Baarlamaanka Kenya oo Ansixiyay Sharci raga u dhashay Dalkaasi ay soo dhaweeyeen Haween badana ka careesiyay !! « AYAAMO TV
Baarlamaanka Kenya oo Ansixiyay Sharci raga u dhashay Dalkaasi ay soo dhaweeyeen Haween badana ka careesiyay !! by Maamule b 1 of 1
1267 Views Date March 22nd, 2014 time 7:57 am
Baarlamaanka Dalka ayaa ayaa meel mariyay sharci raga u dhashay Dalkaasi u ogolaanaya in ay guursadaan Haween badan iyadoo aysan jirin wax shuruud ah oo lagu xirayo raga haweenka badan guursanaya.
Xildhibaanada Baarlamaanka Dalka Kenya ayaa dood dheer oo ay yeesheen kadib waxa ay isku raaceen in raga loo fasaxo in ay guursan karaan haween badan iyadoo la ixtiraamayo Diimaha kala duwan ee dadku heestaan
Dalka Kenya ayaa horey waxaa ugu dagsanaa Sharci la xariira in raga u dhashay Dalkaasi marka ay doonayaan in xaas kale oo cusub guursadaan ay waajib ku aheed in uu ninku u sheego xaaskiisan kana helo ogolaansho uu naag kale ku guursan karo.
Xubnaha raga ah ee ku badan Baarlamaanka Dalka Kenya ayaa aad ugu ololeeyay meel marinta sharcigan cusub ee dhigaya in rag ay guursan karaan Xaasas badan iyagoon wax fasax iyo ogolaansh ah aysan ka qaadan Haweenka ayqabaan.
Xildhibaan Junet Moxammed, oo kamid ahaa Xubnihii ansixiyay sharcigan cusub ayaa u sheegay Haweenka Kenya iyo kuwa kale ee kunool Qaarada Afrika in ay ogaadaan marka iyaga la guursanayo in ninkooda uu xaasas kale lala guursan doono.
Xildhibaanada Haweenka ah ee ku jira Baarlamaanka Dalka Kenya ayaa iyagu aad uga soo horjeeday Meel marinta Sharcigan cusub, waxa ayna tilmaameen in arintan ay saameeneyso dhamaan qoysaska.
Sharcigan ay hada ansixiyeen Baarlamaanka Dalka Kenya waxaasi ada ah usoo dhaweeyay rag badan oo u dhashay Dalkaasi una hamuun qabay in ay guursadaan haween kale , waxaa dhinaca kale Sharcigan aan ku farxin qaarkoodna ka careesiiyay Haweenka dalka Kenya.